Ukophula iiSayithi ze-100,000 eziPhezulu ze-Alexa | Martech Zone
Ukophula kwiiSayithi ze-100,000 eziPhezulu ze-Alexa
NgoLwesithathu, nge-3 kaJanuwari 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kuthathe iinyanga ezintandathu zomsebenzi onzima, kodwa namhlanje ndijongile Alexa kwaye ndawaphule amanqaku ayi-100,000 (i-avareji yeenyanga ezi-3).
Ukuba bendinokuqikelela, bendiya kuthi nge-10 ukuya kwi-20 iiyure ngeveki kwibhlog yam kwiinyanga ezi-6 ezidlulileyo indifumene apho. Ndandinethemba lokuyibethelela ngaphambi koNyaka oMtsha, kodwa ndilungile ngeentsuku ezi-2 ezongezelelweyo.
Kutheni ndisabelana ngale nto? Njengayo nayiphi na enye into, ndicinga ukuba kuhle ukuzibekela iinjongo. I-Alexa yeyona nto ikufutshane endinayo 'kwiNqanaba le-Intanethi' ke iyandixelela ukuba indawo yam yenza njani ngokuchasene nabo bonke abanye abantu. I-Technorati ibonelela ngendlela ibhlog yam esenza ngayo ngokuchasene nabanye. Ndiphantsi kwe-12,000 kwaye ndinethemba lokwenza iibhloko eziphambili ze-5,000 ngokuphela konyaka.
Yintoni endiyenzayo ngokwahlukileyo? Ndenze uhlengahlengiso kwakhona lwesibini, ukulungiswa kweinjini yokukhangela, ukulungiswa kweetemplate zam, iibhlog ezininzi zinika amagqabantshintshi kwezinye iibhlog, okuninzi kokulandela umkhondo… kodwa ubukhulu becala ndizamile ukuhlala ndinyanisekile kumbono wam wokuba ibhlog yam kufanele ukuba yintoni ukwenza. Ndifuna ukwabelana ngolwazi ngokucacileyo malunga nokuthengisa kunye nokuzenzekelayo.
Izihloko zam ziyahluka ngokubanzi, ngamanye amaxesha ndongeza ezinye iinkcukacha zolwazi lomntu (ukuze undazi buqu) kwizihloko ezikwinkqubo (yinxalenye yobomi bentengiso yanamhlanje- ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo), intengiso kunye nendlela imeko yokuqwalaselwa kwabathengi etshintsha ngayo, ukubhloga kunye Inceda njani ngokwenene ukuthengisa, kwaye kunjalo neerandi zam ngamaxesha athile.
Kubonakala ngathi isebenza kakuhle, kwaye ndiyavuya uyayonwabela. Nceda undazise ukuba kukho ezinye izihloko onqwenela ukuzibona ndizigubungela. Kwaye ke, ndiza kuqhubeka ndithetha nawe ngqo malunga nemiceli mngeni endijongene nayo ngokubhekisele kubuchwepheshe bokuthengisa!
Izikhokelo zaBaqalayo kwi-SQL Inaliti kunye ne-Cross-Site Scripting
I-WordPress: Iplagi ye- # 1 yonke indawo KUFUNEKA unayo
Jan 3, 2007 ngo-9: 19 PM
Ngokuqinisekileyo, uSean… I-Alexa ibonakala ichaneke ngakumbi xa ulindile. Ndicinga ukuba kungenxa yokuba u-Alexa usebenzisa isampulu 'engahleliyo' ukuqikelela ukufikelela. Ke-ngokuhamba kwexesha, ihlala ichanekile. Eso sesinye sezizathu zokuba ndihoye ixesha elide kwaye i-3-inyanga yayiyinjongo yam kunokuba 'namhlanje'. Ndiye ndajonga kancinci mihla le njengoko ubonile indawo yakho, kodwa ngokuhamba kwexesha yeyona nto ibalulekileyo.
"Wow" kunye "U-Oh" ngokuqinisekileyo yinto endiyilandelayo. Ndisebenza nzima kwibhlog ukuze into yokugqibela endifuna ukuyibona kukuba ndibeka abantu endaweni yokufumana kunye nokugcina ababhalisile. Yimilinganiselo yokusebenza kwam.
Ikwaluphawu olukhulu okoko ndadibana nabanye abathengi kwiibhloko zabo. Ukuba andikwazi ukukhulisa ukufikelela kwam, andiqinisekanga ukuba kufanelekile ukuba bandimamele! Kufana nokuqesha ingcali ye-SEO engekho kwi-10 ephezulu… ungazikhathazi!
Jan 4, 2007 kwi-6: 06 AM
Siyavuyisana noDoug! Gcina izithuba ezintle mfondini 🙂
Jan 6, 2007 ngo-11: 56 PM
Ndiyakuvuyela iDoug! Ubonakalisile ukuba ukusebenza nzima kuhlawula. Konke okusemandleni ngokulwa nogaxekile, sidinga uNeo 🙂 Ukujonga phambili kwimvuselelo yebhlog kunye nezithuba zakho ezinolwazi.
Jan 10, 2007 ngo-4: 32 PM
Ndiyakuvuyela! Ukuba ngumqondiso we-nerd eofisini yam ndenze into entle ye-SEO ndisebenza ngokwam ndizama ukuba ibhlog yethu iqatshelwe kwaye ifundwe. Siye senyuka senyuka e-Alexa ngokunjalo kodwa asikaqhekezi uphawu lwe-100K yeenyanga ezi-3. Ke ndiyazi ngokuchanekileyo ukuba kunokuba nzima kangakanani.
Enkosi ngebhlog elungileyo, qhubeka kuyo.
UChris Kieff kwiMSCO
Ibhalwe nguMlobi we "ZOKUTHENGISA KWAKHO ZOKUTHENGISA" UMark Stevens
Jan 11, 2007 kwi-8: 52 AM
Jan 13, 2007 kwi-1: 20 AM
Enkosi ngolwazi. Indawo entle ecocekileyo.
Mar 19, 2007 ngo-10: 46 AM
Ndicinga ukuba iziphumo ze-Alexa zifumana ukuchaneka ngakumbi kwindawo enkulu / kwezithuthi. Kwinqanaba elincinci abantu banokukhuthaza iziphumo ezingezizo ngokufumana iqela labantu ukuba bafake ibar yesixhobo kwaye bandwendwele ezinye iisayithi (ndibone ezi ndawo zintsha zisanda kuvela)
Ngokwam, ndilinganisela impumelelo yesiza ngendlela eluncedo ngayo nangengxelo. Indlela yokulinganisa oko kum kukujonga izibalo zeseva zam kunye nokubukela imeko ethe chu yokugcwala kwabantu.
Agasti 9, 2008 kwi-9: 42 AM
Ukuba ufuna i-Alexa ikunike irekhodi elichanekileyo lokugcwala kwakho unokufaka iwijethi eya kuthi yazise i-Alexa ngalo lonke ixesha kutyelelwa iwebhusayithi yakho- hayi xa umntu etyelele ibar yesixhobo.
Mar 30, 2009 ngo 12:15 PM
Halala ndoda! Mhlawumbi unokubonelela ngeengcebiso zokunceda ibhlog yam ikwi-100k ephezulu nayo!
Mar 30, 2009 ngo 3:12 PM
Umsebenzi onzima, ukubhloga mihla le, kunye namandla = impumelelo. Ndinyukile kwi-50k ephezulu ngoku.
Juni 30, 2009 ngo-10: 22 PM
Kungoku nge-30 kaJuni ka-2009 kwaye ndikhubekile kwisithuba sakho sangoJanuwari 3… Makuthi nindenzele imibhiyozo yamva nje ngempumelelo yenu. Ngaphantsi kwe-100,000 kwiinyanga ezi-6 yinto eyenziweyo.
Sikhuphe iwebhusayithi yethu yeelates ngoNovemba ka-2008 kwaye ekugqibeleni sifumene inqanaba lethu phantsi kwesigidi esinye. Sijonge ukuba siza kuba ngaphantsi kweminyaka eyi-1 100,000 xa kuphela iminyaka.
Ewe, qhubeka nomsebenzi olungileyo…
Juni 7, 2013 ngo-9: 05 AM
Sawubona uDoug, ngoku i-Alexa yam iphakathi kwe-105k-110k, ndingenza ntoni ukuze ndigqithe kwi-hump nangaphantsi kwe-100k. Indawo enkulu kunye nolwazi olungcono. Qhubeka nomsebenzi olungileyo, enkosi!
Juni 7, 2013 ngo-1: 19 PM
Feb 3, 2015 ngo-8: 29 PM
Ngaba usakuxabisa ukulinganiswa kwetekhnoloji ukumisela ukuba isiza siqhuba kakuhle kangakanani?
Feb 4, 2015 ngo-10: 37 AM
Hayi, ngokunyanisekileyo andigcinanga ixesha elithile. Ndiyakholelwa ukuba impembelelo kwezentlalo inefuthe elikhulu kule mihla ebhodini.